ACC, The Atlantic Coast Conference Schools
Kubva kuNew England kusvika kuFlorida, ACC Schools Shine paMunda uye muChikoro
Yunivhesiti iri muAtlantic Coast Conference inogona kuva sarudzo yakanaka kana iwe uchida kukosi yako yekorogi inosanganisira mitambo yakazara, maasnas anonzwa matsi, uye mapoka makuru ekudzidzira. Iva nechokwadi chekutora pane "dzidza zvakawanda" zviri pasi apa kuti uwane zvinotora kuti zvigamuchirwe pane imwe neimwe yezvikoro. Uchaona kuti aya masayunivhesiti ane dzidzo dzakasimba uye tsvakurudzo yekuzadzisa maitambo avo. Misangano yemisangano iyi inotora nzvimbo yakawanda kubva kuMassachusetts kusvika kuFlorida.
IAC inhengo yeBhola Bowl Subdivision yeCAAA's Division I.
Imwe yepamusoro yevadzidzi veKaturike munyika, Boston College ine mazano akanaka eGothic pane imwe nzvimbo mumuganhu weBoston weChestnut Hill. Purogiramu yebhizimisi yepresduduate inonyanya kusimba. Chimwe chikamu chiri pedyo nemamwe makoroji akawanda eBoston .
Nzvimbo: Boston, Massachusetts
Chikoro chechikoro: pachake, Jesuit
Kunyoresa: 14,466 (9 870 pasi pedduates)
Ongorora kambani: Boston College photo tour
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, nezvimwewo ruzivo ona mufananidzo weBoston College
Tilman Hall paClemson University. Angie Yates / Flickr
Imwe yunivhesiti yepamusoro yevoruzhinji muSouth Carolina, Clemson iri pakati pezvikomo zveBlue Ridge Mounya pedyo nemhenderekedzo yeLake Hartwell. Bhizimisi uye unyanzvi zvakanyanya kufarirwa, uye Clemson anozviparadzanisa nemhiko yakasimba yekuita basa rekudzidza. Dare rebhobho rave rakanyanya kunyanya mumakore achangopfuura.
Nzvimbo: Clemson, South Carolina
Chikoro chechikoro: pevanhu
Kunyoresa: 23 406 (18,599 pasi pedduates)
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, nezvimwewo ruzivo ona chinyorwa cheClemson University
Pamasunivhesiti ose eAtlantic Coast, Duke ndiyo yakaoma kupinda. Zvose mbiri yekugamuchirwa uye kukodzera kwevadzidzi kunoita kuti Duke akaenzaniswe kune dzakawanda dzezvikoro zveNort- eastern yeChiki . Inowanikwa muDurham, North Carolina, Dus's campus ine mamwe mazano ekugadzirira eGothic.
Nzvimbo: Durham, North Carolina
Chikoro chechikoro: pachedu
Kunyoresa: 15 735 (6 609 undergraduates)
Tema: Blue Devils
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, nezvimwewo ruzivo ona Duke University purogiramu
Chimwe chezvikwata zvemahofisi eFlorida state university system, FSU inogara kumadokero kweTallahassee uye inofambisa nyore kuGulf of Mexico. Simba rezvidzidzo kuFlorida State rinosanganisira mimhanzi, dhani, uye engineering. Florida State ndiyo yunivhesiti huru pane ACC.
Nzvimbo: Tallahassee, Florida
Kunyoresa: 41 173 (32 933 pasi pedduates)
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, nezvimwewo ruzivo ona florida yeFlorist University University
Iri muAtlanta, Georgia Tech isimba guru rezvidzidzo rinoita kuti rive panzvimbo yezvidzidzo zvepamusoro zvevhidhiyo uye zvidzidzo zvepamusoro . Uye hongu, mapurogiramu avo emitambo ariwo akanaka.
Nzvimbo: Atlanta, Georgia
Kunyoresa: 26 839 (15 489 pasi pedduduates)
Dhiyabhorosi: Jirafu jena
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongororwa kwemashoko, mari, nezvimwewo ruzivo ona geji yeGeorgia Tech
University of Miami. Jaine / Flickr
Bhizimisi uye vanamukoti vanozivikanwa kwazvo paYunivhesiti yeMiami, uye chikoro chacho chinodadawo purogiramu yepamusoro-yepamusoro yegungwa yebhaibheri. Inowanikwa mumusha weCoral Springs, kwete Miami, yunivhesiti yacho inotsanangurwa nezvivako zvemazuva ano, zvitubu, nemichindwe.
Nzvimbo: Coral Gables, Florida
Kunyoresa: 16 744 (10 792 pasi pedduates)
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongororwa kwemashoko, mari uye mamwe mashoko, ona University of Miami profile
North Carolina (Yunivhesiti yeNorth Carolina kuChapel Hill)
Yunivhesiti yeNorth Carolina Chapel Hill. Allen Grove
Zvidzidzo zvepamusoro, UNC Chapel Hill ndiyo inonyanya kushandiswa kumayunivesiti ehurumende pane urongwa, uye Kenan-Flagler Bhizinesi Yadzo Yakashambadza mazita ezvidzidzo zvepamusoro pezvikoro zvebhizimisi . Yakasunungurwa muna 1795, Chapel Hill ine nzvimbo yakanaka uye yakasikwa. Kune North Carolina vagari venyika, yunivhesiti iyo inokosha zvikuru.
Nzvimbo: Chapel Hill, North Carolina
Kunyoresa: 29 468 (18,522 pasi pedduates)
Tema: Tar Heels
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongororwa kwemashoko, mari uye mamwe mashoko, ona chinyorwa che UNC Chapel Hill
North Carolina State University inhengo yakatangira yeAlantic Coast Conference, uye ndiyo yunivhesiti huru kuNorth Carolina . Purogiramu dzinonyanyozivikanwa pasi pepuroduate iri mune bhizinesi, inyanzvi, sciences uye zvemagariro evanhu.
Nzvimbo: Raleigh, North Carolina
Kunyoresa: 33 755 (23 827 pasi pedduduates)
Nokuda kwekubvuma, kuongorora zvikoro, mari nezvimwewo ruzivo, ona nhoroondo yeNorth Carolina State University
Iri munzvimbo yeFinger Lakes iri pakati peNew York, mapurogiramu eNyunivhesiti Yunivhesiti mune zvidzidzo zvevhidhiyo, unyanzvi uye bhizinesi zvose zvakakosha kutarisa, kungotaura zvishomanana. Iyo yunivhesiti inyanzvi mune zvehupenzi uye sciences yakagamuchira Syracuse chitsauko chePhi Beta Kappa .
Nzvimbo: Syracuse, New York
Chikoro chechikoro: Private
Kunyoresa: 21 970 (15 218 pasi pedduduates)
Ongorora Campus: Syracuse University Photo Tour
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongororwa kwezvikoro, mari, uye mamwe mashoko ona shanduro yeSyracuse University
Vadzidzi paYunivhesiti yeLouisville vanobva kunzvimbo dzose makumi mashanu uye nyika dzinopfuura 100 kune dzimwe nyika. Vadzidzi vane huwandu hwakasiyana-siyana hwezvidzidzo kubva kuchikoro chevunivhesiti 13 nemakoroji. Nyanzvi dzezvemabhizimisi dzakadai sebhizimisi, ruramisiro rezvemhosva, uye mukoti zvose zvinozivikanwa chaizvo.
Nzvimbo: Louisville, Kentucky
Chikoro chechikoro: peji yunivhesiti
Kunyoresa: 21,578 (15 826 undergraduates)
GPA, SAT uye ACT girafu yekugamuchirwa kweLouisville
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, uye mamwe mashoko ona University of Louisville .
Main Building paYunivhesiti yeName Dame. Allen Grove
Pakati pemayunivhesiti makuru eEast East, Notre Dame yechipiri chete kuGeorgetown nekuda kwekusarudzwa kwayo. 70% yevadzidzi vanobvumirwa vakakwirira munzvimbo yepamusoro 5% yevadzidzi vavo vekusekondari. Notre Dame vari pasi pekudzidza vanoenda kunowana nhamba yepamusoro yeDhigirii madhigirii, uye iyo yunivhesiti masimba ezvidzidzo akawana chitsauko chePhi Beta Kappa .
Nzvimbo: Notre Dame, Indiana
Chikoro chechikoro: Chega, Katurike
Kunyoresa: 12 393 (8 530 pasi pedduduates)
Tema: Kurwisa Irish
Ongorora Campus: Yunivhesiti yeNew Dame Photo Tour
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongororwa kwezvikoro, mari, uye mamwe mashoko ona nhoroondo yeName Dame
Yunivhesiti yePittsburgh Cathedral of Learning. gam9551 / Flickr
Pitt ine simba rakakura-siyana kusanganisira Philosophy, Medicine, Engineering neBusiness. Yunivhesiti inowanzotarisana pakati pemayunivhesiti makuru makumi maviri ehurumende muU.S., uye mapurogiramu ayo ekutsvakurudza akasimba akawana iyo nhengo muChechi yeUniversity of American Universities.
Nzvimbo: Pittsburgh, Pennsylvania
Chikoro chechikoro: Paruzhinji
Kunyoresa: 28 664 (19 123 pasi pedduates)
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, uye mamwe mashoko ona University of Pittsburgh profile
Virginia (University of Virginia kuCharlottesville)
The Lawn paYunivhesiti yeVirginia (chinga mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Allen Grove
Yakasimbiswa naTomber Jefferson, Yunivhesiti yeVirginia ine imwe yemakambani anokosha uye akaisvonaka muUnited States Iyo aslo ine mvumo yakakura yeyunivhesiti yevanhu vose. Yunivhesiti yeVirginia, pamwe neGeorgia Tech uye UNC Chapel Hill, yakaita runyora rwangu rwemasunivhesiti makuru ehurumende .
Nzvimbo: Charlottesville, Virginia
Kunyoresa: 23 898 (16 331 pasi pedduduates)
Ongorora Campus: University of Virginia Photo Tour
Kubvuma kugadziriswa, kuongorora zvikoro, mari, uye mamwe mashoko ona University of Virginia profile
Graduate Life Center kuVirginia Tech. Photo Credit: Allen Grove
Iri muBlacksburg, Virginia Tech inowanzobatana pakati pezvidzidzo zvepamusoro gumi zvevashandi vehurumende. Inowanikwawo mahombekedzo akakwirira emabhizimisi ayo uye mapurogiramu ekugadzira. Virginia Tech inochengetedza mapurisa evanhu, uye kubva pakugadzwa kwayo muna 1872 chikoro chave chichitsanangurwa sekoroji rehondo.
Nzvimbo: Blacksburg, Virginia
Kunyoresa: 33,170 (25 791 vasiri vepasi)
Ongorora Campus: Virginia Tech Photo Tour
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongororwa kwezvikoro, mari, uye mamwe mashoko ona mufananidzo weVirginia Tech
Reynolda Hall ku Wake Forest. Photo Credit: Allen Grove
Imwe yemayunivhesiti mana ari oga muAtlantic Coast Conference, Wake Forest yaiva imwe yemakorosi okutanga okukwikwidza kuita SAT uye ACT zvikoro zvingasarudzwa kuti zvigamuchirwe. Iri muWinston-Salem, North Carolina, Wake Forest inopa vadzidzi vayo sarudzo yakakura yezvidzidzo zvedzidzo yekoroji uye nzvimbo huru yemitambo yeyunivesiti.
Nzvimbo: Winston Salem, North Carolina
Kunyoresa: 7 968 (4,955 undergraduates)
Dhiyabhorosi: Demon Deacons
Ongorora Campus: Wake Forest photo tour
Nokuda kwekugamuchirwa, kuongorora zvikoro, mari, nezvimwewo ruzivo ona chinyorwa cheWake Forest University
Chaining Forward uye Chaining Backwards
Dzidzai Conjugations ye "Prevenir" (Chenjerera) muchiFrench
Nhungamiro Yekutora-Nhanho Kuita Kuti Wako Muchengetedze Muchena
Akakucheka, Kuwedzerwa Kwemvura uye Kusvina muRome Yekare
Ndeipi W Wisa Program?
Zvipo Zvinomwe zveMweya Mutsvene
Anglo-Dutch War: Admiral Michiel de Ruyter
Maitiro Anotarisana neChirongwa cheSvondo yeMagetsi
Princess Olga weKiev
Iwe Unofanirwa Kuendesa Vaporofesa Kumakoro Ezvimwe Zviyo?
Ndiani Akazadza Toothpick?
Chiyeuchidzo cheMasoja Mazuva Anotenderera Nyika
October Fly Kubata Mazano: Endai Kukuru Kana Endai Muduku
Atomic Number 2 paPeriodic Table
Kuverenga Chidzidzo - Kutarisa Zvikamu zvekutaura
'Sezvaunofarira' Zvinyorwa: Rudo
US Open Vashandi: Vose vaGolfers Avo Vakagadzirisa Tsamba
Izvi ndezvimwe zvePasina Zvokudya Zvakanyanya Kupinda muNhoroondo